सविन शर्मा शनिवार, फाल्गुन १८, २०७५, ११:२९:०० मा प्रकाशित
काठमाडौं । वन मन्त्रालयले तराई र मध्यपहाडका कतिपय जिल्लाहरुमा लागू गरेको ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन’ कार्यक्रमबारे ठूलो बहस चलिरहेको छ । प्रदेश १ को सरकारले वन फँडानी तीव्र भएको भन्दै तत्कालका लागि यो कार्यक्रम रोकेपछि यसबारे राष्ट्रिय बहस सुरु भएको थियो । ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन’ पूर्व वनमन्त्री अग्नि सापकोटाका पालामा विभिन्न जिल्लामा लागू भएको बताइए पनि नवलपरासीका जिल्ला वन अधिकृत विजयराज सुवेदी भने ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन’को सुरुवात आफूले गरेको दावी गर्छन ।
देशको वन नीति तर्जुमा गर्न सक्ने अधिकृत सुवेदीले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनबारे धेरै अध्ययन अनुसन्धान गरेका छन् । यसक्रममा उनले प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिहरुलाई लक्षित गर्दै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको बुझाई कमजोर भएको बताए । उनले जंगलका रुखहरुलाई खसीसँग तुलना गर्दै भने, ‘दुबै उस्तै हुन्, काट्दै बेच्दै गर्नुपर्छ ।’ घुस नखाने एवं इमान्दार वन अधिकृतका रुपमा परिचय बनाएका सुवेदीले वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको बारेमा विस्तृत जानकारी गराएका थिए ।
शुरुवाती दिनमा यो कार्यक्रमको विषयमा जानकारी नहुँदा के गर्ने भन्ने विषयमा अन्यौलमा रहेको मन्त्री बस्नेतले वन व्यवस्थापनका विषयमा बुझेपनि वन क्षेत्रलाई रोजगारीको मुख्य आधार हुने निष्कर्ष निकाले । उनले बजेटमा नै वन क्षेत्रलाई रोजगारको मुख्य आधार क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न सकिने भन्दै योजनामा नै समेटे । उनले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनलाई अझ सशक्त र सबैतिर फैलाउने अठोट लिए । त्यो कामलाई पुरा गर्ने तर्फ मन्त्रालयका योजनाहरु बनाउन निर्देशनसमेत दिए ।
वन मन्त्रीले नै चासो देखाएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्यक्रमलाई अझ सशक्त रुपले अघि बढाउने बाटोमा मन्त्रालयका सचिव डा विश्वनाथ ओलीलेसमेत साथ दिए । उनले कार्यक्रमलाई अझ सुधारेर अघि बढाउने अठोट लिए । मन्त्रालयले खाका तयार पार्यो । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनले बजारमा काठको अभाव समाप्त हुने निष्कर्ष निस्कियो ।
तर कार्यक्रमलाई सफल बनाउने गरी मन्त्रीले ल्याएको योजना नै अहिले कार्यान्वयन गर्न नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको छ । ‘शुरुका दिनमा कर्मचारीको साथ र सहयोग म उत्साहित भएर लागेको थिएँ,’ मन्त्री बस्नेतले भने, ‘तर यो कार्यक्रम असफल बनाउने बाटोमा पछिल्लो समय कर्मचारी नै लागेको देख्दा दुःख लागेको छ ।’
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको विषयमा त्यस विषयमा जानकार वन अधिकृत सुवेदी भने आफूले नै यसको सुरुवात गरेको भन्दै राम्रो कार्यक्रमलाई असफल बनाउने बाटोमा लागेकोप्रति दुःख व्यक्त गर्दछन् । ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको सुरुवात गर्ने मान्छे नै म हुँ । यो कार्यक्रम ०६८÷०६९ आर्थिक वर्षदेखि लागु भएको हो ।
आजभन्दा ७ वर्ष अगाडिदेखि हो,’ उनले भने, ‘यो सफल कार्यक्रम हो । यो यही नेपालको अनुभवबाट गरिएको हो । अन्तको अनुभव पनि हुने भो । हामीले फरेस्टीमा पढेको पनि त्यही हो । त्यही पढेर आएको । थप, यहाँको अवस्थालाई हेरेर यो गरेको हो ।’ कार्यक्रमको आवश्यकताको विषयमा भने अधिकृत सुवेदी भन्छन्, ‘प्रथमतः हामीले परम्परागत हिसाबले वन व्यवस्थापन (म त्यसलाई व्यवस्थापन पनि भन्दिनँ) गर्दाखेरि वनको हैसियत पनि बिग्रँदै गयो । वनको हैसियत बिग्रियो भन्नुको अर्थ के हो भने जंगलमा पूरै बूढा रुखहरु भए, धोद्रो पल्टिँदै गए ।
नयाँ बिरुवाहरु उम्रन र हुर्कन सकेनन् । त्यसकारणले वनको हैसियत बिग्रियो ।’ उनले तराई र मध्यपहाडको मात्रै वन व्यवस्थापन गर्दाखेरि ६ देखि ९ करोड सेफ्टी काठ उत्पादन गर्न सकिने बताए । तर, अहिले नेपालले एक करोड पनि उत्पादन गरेको छैन । यसले गर्दाखेरि अहिले बाहिरी देशबाट काठ आयात गरिराख्नुपरेको छ ।
इण्डोनेसिया लगायतका देशहरुबाट अहिले नेपालमा काठ आइराखेको छ ।अहिले नेपालमा ४४ दशमलव ७४ प्रतिशत वन क्षेत्र छ । तर, यसले राजस्वमा कुनै योगदान नै गर्न सकेन । त्यसैले राजस्व र रोजगारीमा योगदान गर्ने हिसाबले पनि यो कार्यक्रम ल्याउनुपरेको हो । वन क्षेत्रमा जहिले पनि लफडा भयो । काठ हरायो, चोरेर खाए भन्नेमात्रै भयो । यसले गर्दा पुरानो सिस्टमले वनको हैसियत पनि राम्रो भएन, वन पैदावरको उत्पादन पनि जति हुनुपथ्र्यो, त्यति हुन सकेन, जसले गर्दा काठ आयात गर्नुपर्यो ।
राज्यलाई जति आम्दानी र रोजगारी सिर्जना हुनुपर्ने हो, त्यो पनि भएन । र, वन क्षेत्रमा विवादमात्रै सिर्जना भयो । यिनै चारवटा कारणहरुले गर्दाखेरि यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सुरु गर्नुपरेको अधिकृत सुवेदी बताउँछन् । कार्यक्रम शुरु भएको ६ वर्षमा यसले त फाइदै फाइदा दिएको उनी बताउँछन् । मान्छेले थाहा नपाएर, नबुझेर समस्या भएको हो ।
एकथरि मान्छेहरु बुझेर, नियतवस नै विरोधमा लागेका छन् । अर्कोथरिले कुरा बुझेका छैनन्, रुख काटेको देख्छन् । तर, रुख भनेको काट्ने चिज भएको उनको विश्लेषण छ । ‘यो कार्यक्रमबाट फाइदा के भएको छ भने वनको हैसियतमा सुधार हुँदै गएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले नयाँ विरुवाहरु हुर्काउँदै गएका छौं ।
नयाँ विरुवाहरु आउनुको अर्थ वातावरणको हिसाबले, कार्बन उत्सर्जन गर्ने हिसाबले राम्रो हुँदै गयो ।’कार्यक्रम सञ्चालन भएपछि वन पैदावरको उत्पादन बढिरहेको छ । अहिले विवादका कारण जुन स्केलमा हुनुपर्ने हो, त्यो स्तरमा काम हुन सकेको छैन । तर, काम गर्न सकेको भए अहिले विदेशबाट काठ ल्याउनुपर्ने थिएन । नेपालको काठ सस्तो मूल्यमा सबैले पाउने स्थिति हुन्थ्यो । अर्को फाइदा भनेको यो कार्यक्रमबाट रोजगारी सिर्जना भएको छ । वनमा नयाँ नयाँ कुराहरु लागू गर्दैछौं । यी यसका फाइदै फाइदा हुन् ।
अहिले उम्रेको सालको बिरुवा काट्नलायक रुख हुनका लागि ८० वर्ष लाग्छ । यो काटेर अहिले नै सकिने होइन । अहिले रहेका बूढा रुखहरु ८० वर्षमा बल्ल काटेर सकिने कार्यक्रमले बनाएको योजनामा छ । त्यतिञ्जेलसम्म त हुर्काउँने रुख काट्ने समय हुने भएकाले कार्यक्रम राम्रो भएर पनि बुझाई कमजोर भएको मन्त्रालयका सचिव डा. ओली बताउँछन् । ‘यसवीचमा कसैले कामै गर्दैन भनेर मान्ने हो भने त अर्कै कुरा भो, काम नगर्ने हो भने त केही पनि हुँदैन,’ उनले भने, ‘हामीले काम गर्दै, हुर्काउँदै गइरहेका छौं । विरुवा हुर्किँदै गइरहेका छन् र हामीले रुखहरु काट्दै गइरहेका छौं ।’
‘सुरुमा नयाँ थियो । त्यसमा लविङ गर्यो । संसदको वातावरण समितिमा छलफल गर्यो ,’ सचिव डा ओलीले भने, ‘मन्त्रालय विभागतिर पनि हामीले पोलिसी बनायौं । त्यसपछि वन मन्त्रालयको रेड बुकमा आएको कार्यक्रम हो यो ।’ यसरी रेडबुकमा आएको कार्यक्रम गर्दा पनि डीएफओले आफूखुशी जंगल बेचेर खान लागेको छ भन्ने आरोप आएकोमा कर्मचारीहरु असन्तुष्ट छन् ।
यो कार्यक्रमबाट तस्करहरुले कुनै प्रवेश नै नपाउने भएकाले यो कार्यक्रमले जनाताको हीत पुग्ने उनको विश्वास छ । ‘पुरानो सिस्टममा हाम्रा कति रुख छन् भन्ने नै थाहै हुँदैनथ्यो । त्यसबेला जे गरे पनि हुन्थ्यो,’ अधिकृत सुवेदी भन्छन्, ‘तर, अहिले त जंगलमा कति रुख छन् भन्ने हामीसँग टोटल हिसाब छ । कति रुख हामीले यो वर्ष काट्दैछौं भन्ने कुराको पनि टोटल हिसाब–किताव राखिएको छ ।’
यसरी काटिएका रुखको बिक्री हुने भनेको सबै लिलामबाट हो । टेण्डर निकालिन्छ । सूचना निकालिन्छ । वन कार्यालयले सूचना निकाल्छ । त्यसमा प्रतिस्पर्धाको आधारमा व्यापारीहरुले टेण्डर हाल्छन् । त्यसको आधारमा बेचिन्छ । ‘वन ध्वस्त हुने भनेको हामीले सखाप पारेर काट्ने र त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने मेकानिज्म नभएपछि हो । यो सरकारको इस्यु हो, यसलाई हामीले करेक्सन गर्दै जानुपर्छ,’ सविच ओलीले भने, ‘दुईसय रुपैयाँ खाए भनेर सबै कार्यक्रम बन्द गर्ने हो भने त हामीले फेरि विदेशबाट काठ निर्यात गरे भइहाल्छ नि । एक सेफ्टीमा हजार रुपैयाँ खान्छन् ठेकेदारहरुले । यसलाई पो हेर्नुपर्यो त ।’
अहिले ६ करोड सेफ्टी काठ व्यवस्थापन गरेको भए वनको हैसियत पनि राम्रो हुने र रोजगारी र आम्दानी बढ्ने थियो । तर अहिले १ करोड पनि उत्पादन गर्न सकिराखेको छैन । अहिले जंगल बढ्न सकेको छैन, पूरै बूढो भएको छ, धोद्रो भएको छ । ‘एउटा खसीलाई दुई वर्ष पाल्यो भने मासु बढ्छ, ४ वर्ष पाल्यो भने त बढ्दैन नि मासु । चार वर्ष पाल्नुको सट्टामा दुई वर्षमा एउटा खसी बेच्ने अनि अर्को खसी ल्याएर दुई वर्ष पाल्यो भने त मासु हुन्थ्यो नि त,’ अधिकृत सुवेदी भन्छन्, ‘यो कुरा वनमा पनि लागू हुन्छ क्या ! धेरैले यो कुरा बुझ्दैनन् । अहिले रुख पूरै धोद्रो भएर ह्युमपाइप जस्तो भइसकेको छ ।’
एक एक रुख हिसाब गरेर काटिएको हुन्छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा कुनै हचुवाका भरमा काटिएको छैन । नेपालको इतिहासमा प्रत्येक रुखको हिसाब राखेर गरेको काम भनेकै यही हो । त्यसैले यसलाई के भनिएको छ भने वनको सुशासनको कडी भनेकै यही हो । गुड गभर्नेन्स । अहिले यो कार्यक्रमबाट अधिकतम काठ निकाल्न सकिन्छ । ९ करोड सेफ्टी काठ निकाल्न सकिने मन्त्रालयको आँकलन छ ।
सम्भावित भीमकाय पहिरोमै विकासे गतिविधि ! बिहिवार, माघ १०, २०७५, १०:११:००
नेपालको वायु प्रदूषणको कारण भारत बिहिवार, जेठ २३, २०७६, १२:४४:००
२००७ सालको क्रान्ति नै आधुनिक नेपालको जग नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक तथा यस आन्दोलनका लोकप्रिय नेता पुष्पलालले उनको पुस्तक ‘नेपाली जनआन्दोलनः एक समीक्षा’ मा नेपालको राजनीतिक अस्थिरतामा भारतीय भूमिकाको वस्तुवादी विश्लेषण गरेका छन्। उनको भनाइ यो रहेको छ कि २००७ सालका उपलब्धि राजाले अपहरण गर्ने कुराको वीजारोपण दिल्ली सम्झौतामा नै भएको थियो। दिल्ली सम्झौता धोका हो भन्ने पुष्पलालको प्रष्ट विचार रहँदै आएको हो। मंगलवार, फाल्गुन ७, २०७५, १३:५०:००